Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Taliyaaniga oo Bilaabay Olole Lagaga Hortagayo Tahriibka.
Xukkumada Talyaaniga ayaa bilawday olole ay uga hortagayso dadka ka soo haajiraya waqooyiga iyo galbeedka Afrika ee isku dayaya inay doon ku imaadaan badda si ay Qaarada Yurub u imaadaan.
Waxay dawladda ololaha u isticmaalaysaa internetka, TV-ga, raadiyaha iyo baraha bulshada si ay u wadaagaan sheekooyinka dadka badda ku imaaday ee soo arkay khatarta badda iyo dilka ay kala kulmaan dadka lacagta dadka ku soo qaada een naxariista lahayn, kuwaasoo si badheedh ah u laaya dadka tahriibka ah.
Barnaamijkan oo ay ku bixi doonto in ka badan hal milyan iyo badh oo dollarka maraykanka ah ayaa waxaa wax ka diyaariyay hay’adda dadka waddamadooda ka haajira ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo (IMO).
Ku dhowaad sagaashan kun (90,000) oo tahriibayaal ah ayaa imaaday Talyaaniga sanadkan ilaa waqtigan xaadirka ah, in ka badan saddex kun ayaa badda ku dhimatay. Halis badan ayay dadka tahriibka ah la kulmaan inta ay kujiraan tahriibka, waxaa jira qaar badan oo maskax ahaan ugu waxyeeloobay dhibaatadii kasoo gaadhay tahriibka, qaar kalana wayba ku laxaad beeleen intii ay tahriibka kujireen.